Crystal Iqhwa ukhonza ngemfanelo bendabuko ukhomba ngophakathi. Ukusetshenziswa izixazululo ezinjalo elingaphakathi evumela umnikazi ukugcizelela udumo yabo. Ake sibheke ukuthi kufanele siqondiswe ngokukhetha Chandeliers ophahleni crystal, izithombe zazo ethulwa kule material.
Zekristalu, uphahla, eqinisweni, ezenziwe ngengilazi abavamile, njengengxenye equkethe barium yombala oxide nomthofu. Ngokusetshenziswa lezi zingxenye, iNgcweti ekwazile ukwandisa ngokuphawulekayo Inkomba yezokubona sokukhanya ukudala umphumela ukuhlakazwa yayo.
Ukuqinisekisa ukuthi play yokukhanya nombala, crystal ikufanele ahlabayo. Ngaphezu kwalokho, ukwelashwa okunjalo kwandisa amandla material. Ngakho-ke, crystal zinhlayiya ingangqubuzani noma ukwambula ku ukushayisana nomunye. Faceted izinga impahla shimmers ezikhanga imisebe yokukhanya futhi tinkling emnandi.
Uma esikhathini esidlule ukwenziwa Chandeliers isetshenziswa ezimhlophe, crystal esobala, lapha namuhla uthengisa Iphalethi ebanzi imibala. Lezi zixazululo sikuvumela ukudala umphumela imisebe ezinemibala ngokuvula crystal ubuso zinhlayiya kuya umthombo wokukhanya.
Zekristalu, uphahla nge amakristalu abomvu akhiqizwa ngokungeza ezibonakalayo compounds igolide ne-cadmium. Ithusi unika ogqamile, ayibe - blue, ngenkathi usebenzisa amakhosi Silicon bengathola okhanyayo pink amathoni.
Okwamanje uveza Chandeliers bluish futhi lemicu empunga elinamathela othini-esiliva, uphahla crystal Czech Republic neFrance. Nakuba lokhu kuthathwa njengesibikezelo esiyiso imfashini imikhiqizo chip crystal amnyama ekwazi ukugcizelela ngobufushane we Interiors. Abakhi Chandeliers ukukhonza izinkampani ikakhulukazi Italian. Kaningi, mikhiqizo zitholakala emizini wendawo.
Ukuze beka kahle Iqhwa crystal endlini, kufanele usebenzise ngala macebiso alandelayo:
Ukuze ephasishi kufanele bakhethe ongakhetha elula. izibani Small izibani elikhanyayo ngeke lapha bheka ezifanelekayo. Kunalokho, Chandeliers omkhulu, uphahla crystal kuzoletha ezinye ngokuphazamiseka.
Uma udinga alengise Iqhwa crystal ekhishini, kungcono kakhulu ukubeka phezu kwetafula lokudlela. Lesi sinqumo ngeke kuphela ukuvula ithuba ukunyakaza khulula azungeze ekamelweni, kodwa kuyokunika umkhiqizo ukujabulela ngesikhathi sakusihlwa. Ngo ikhishi elincane kufanele akhethwe ngaphandle Iqhwa elenga lens.
Uma indlu has igumbi lokudlela elikhulu, okuyinto lihlelwe wetafula, kuyafaneleka ezindla, hang ezimbili Chandeliers ophahleni crystal ngaphezu kwakhe. Kulokhu kungenzeka ukuthola ukukhanya iyunifomu ngaphesheya endaweni izakhiwo, kanye ukwenza design elingaphakathi yoqobo ngaphezulu futhi kunokulinganisela yini.
Hang a Iqhwa crystal e nursery is hhayi Kunconywa. Izingane hhayi kuphela kungalimaza umkhiqizo ezibizayo, kodwa futhi ukuba bayalimala usebenzisa lens faceted njengoba ukuzijabulisa.
Njengoba umkhuba ubonisa, crystal Iqhwa elengayo nje ukulingana kahle ezindaweni eziphakathi nezwe izikhala ngokwanele ezinkulu nge Uphahla lwangaphakathi eliphezulu. Desirably, ibanga ukusuka phansi kuya onqenqemeni engezansi Iqhwa akuyona esingaphansi 190 cm. Kungenjalo imindeni izivakashi ngephutha uthinte ukumiswa.
Ngokubheja Iqhwa crystal elingaphakathi, kubalulekile ukucabangela isiqondiso ukukhanya imisebe bahlakazwa kwangasala izici. Lezi zikhathi kakhulu ezithinta inhlalakahle sabantu abangakwazi egumbini.
Yini okufanele ibe ibhodlela lika nosana?
Indlela ukuvimba amawebhusayithi kukhompyutha yakho? Imiyalelo Wabasaqalayo
Ugandaganda Mini okwesikhathi yasendlini ngezandla zabo. Indlela yokwenza mini-ugandaganda abendlu
McDonald: Franchise - ibhizinisi ngaphansi brand omhlaba
Yini ukunambitheka iodine emlonyeni wakho?